काठमाडौंबाट कुम्लो, कुटुरो बोकेर हिँडेका मजदुर, गरीबहरु देख्दा भावुक हुन्छु : प्रचण्ड – Everest Pati
काठमाडौं। पहिलो कुरो के हो भने हामीले देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्न पनि राजनीतिक सहमति, समझदारीको आधारमा सम्भव भएको हो । किनकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याई पुर्याउनको लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका, नागरिक समाजको भूमिका, पत्रकारहरुको भूमिका र आम नेपाली जनताको भूमिका ईतिहासमा स्थापित भई नै सकेको छ । अब यसमा मेरो के कति योगदान रह्यो भन्ने कुरा ईतिहास र जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । मलाई खुशी के मा छ भने त्यो राष्ट्रिय सहमति बनाउन र एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनतिर देशलाई लैजानको लागि भूमिका खेल्ने, योगदान गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो । म त्यसमा आफूलाई गर्वको महशुस गर्दछु ।
यस दृष्टिबाट हेर्दा अहिले मैलेपनि आफ्नो ठाउँबाट यो महामारीकाविरुद्ध मानव जातिको एकताको लागि, नेपाली जनताको एकता, नेपालका सबै शक्तिहरुको एकताको निम्ति लगातार अपिल गरिरहँदा प्रधानमन्त्री मेरै पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँग मेरो यो विषयमा कुनै विमति भएको म देख्दिन । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा । अब कतिपय ईस्युहरुमा होला, तर अहिले त्यो ईस्युमा छलफल गर्ने यो बेला पनि होईन, हामीले बलियो एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर यो महामारीविरुद्ध लड्ने संकल्प गर्नुपर्दछ ।
नेपाली जनताले बडो धैर्यताको साथ हामीलाई साथ दिईरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले अहिलेपनि साथ दिईरहेको स्थिति छ, त्यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । यो बेलामा अन्य विषयमा कहिलेकाहीँ देखापर्ने बहसहरु र विवादहरुलाई अहिले अगाडि ल्याउन म विल्कुल चाहन्न । म पार्टी किनभने ठूलो पार्टी, हामीले ऐतिहासिक रुपले एकता गरेका छौं । र, त्यो एकताको नेतृत्व गर्नेमा म र केपी ओली दुई वटा अध्यक्ष भएरनै मुख्य पहल लिएको हुनाले यतिबेला म फेरि विवादका कुरा, विमतिका कुरातिर जान चाहन्न । जो मान्छेहरु त्यसरी जान्छन् या प्रचार गर्छन् । उनीहरुले बास्तवमा देशको, जनताको आवश्यकत्ता र भावनालाई बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । म चाहीँ अहिले त्यतातिर टिप्पणी गर्न चाहन्न।
म भएको भए संयन्त्र बनाउँथे मूलभुत रुपमा त समझदारी छँदैछ । अस्ति भर्खरै बसेको बैठकमा पनि हामीले पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ गरेर लानुपर्ने हुन्छ । हामीले राष्टिय एकतालाई अझै सुदृढ गरेर लानुपर्ने हुन्छ । हामीले सबै दल र सबै पक्षसँग समझदारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अझै दह«ो बनाउने कुरा गरेका छौं । र, त्यसमा हाम्रो सहमति नै छ अब मैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान सकिने कुरा गरेको हो । तर, मैले त्यसो भन्दै गर्दा मैले साथ–साथै के पनि भनेको छु भने मुख्य कुरा सरकार हो ।
सरकारले बनाउने संयन्त्र, जो बनेको छ । त्यो ठीक छ । त्यसले नै काम गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरुलाई पनि विश्वास लिएर जाने सन्दर्भमा मैले भनेको हो ।
सरकारले बनाउने संयन्त्र, जो बनेको छ । त्यो ठीक छ । त्यसले नै काम गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरुलाई पनि विश्वास लिएर जाने सन्दर्भमा मैले भनेको हो । मैले भनेको कुरा यदि सरकारलाई अहिले आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ भने मैले फेरी जबरजस्ती गर्न खोजेको त होईन । मैले भन्ने त फेरि त्यस्तो बन्ने हो भनेपनि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हो है भनेको थिएँ । यदि म भएको भए त त्यसो गर्थें । तर, सरकार त अहिले हाम्रो अर्को अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा छ । उहाँलाई जे सजिलो लाग्छ, त्यही गर्ने हो । तर, मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमित, राष्ट्रिय एकता बनाउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ ।
केपी ओली नै पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री, हामीबीच विमति छैन सरकार परिवर्तनको अहिले सम्भावना छैन । त्यो कुरा टुँगिसक्यो । मैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाहिर चलखेल गरेको भन्ने आरोप बेकारको कुरा हो । त्यो सब चाहीँ मान्छेका मनोगत कुरा हो । बनको बाघले खानु कहाँ छ ? कहाँ ? मनको बाघले खाएजस्तो कसैलाई लाग्या होला । त्यो बेकारको कुरा हो । केपी ओलीजी नै पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री हो । अहिले हामी सबै कोरोनाको विरुद्ध संघर्षमा छौं ।
कोरोनाविरुद्ध नेपालले विजय प्राप्त गर्छ अहिले हामीले जसरी काम गरिराखेका छौं । यसको रोकथाममा नै जोड दिएका छौं । अनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचार गर्ने तयारी पनि हामीले गरिराखेका छौं । त्यसकारण यसमा नेपालले सफलता हाँसिल गर्छ । नेपाली जनतालाई सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु । र, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा, यद्यपी वैज्ञानिकहरुले र थुप्रै स्वास्थ्य विज्ञहरु यसमा लागिरहेका छन् । ती सबैको भनाईले यसको अझैपनि भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन् । जबसम्म खोप पत्ता लाग्दैन् । सम्पूर्ण रुपमा निर्मुल गर्न त गाह«ो हुन्छ भन्ने भनाईहरु पनि आईरहेको छ । तर, पुरै संसार लागेको हुनाले छिट्टै त्यस्तो भ्याक्सिन बन्छ र यो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी भएर विश्वास गरेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
कोरोनाविरुद्धको लडाईमा सहकार्य जारी छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिसँग बडो नजिकबाट पटक–पटक बैठक गर्ने, छलफल गर्ने र अन्तरंग कुराकानी पनि गर्ने, अझ भारतको गोवामा त मेरो अन्तरंग कुरा गर्ने अवसर जुट्यो । र, यो त्रिदेशीय साझेदारीको बारेमा होस या हाम्रा दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने बारेमा खुलेर कुरा गर्ने सन्दर्भमा मेरो विश्वासको गहिरो सम्बन्ध त दुवै नेतासँग बनेकै छ । र, मैले दोस्रो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि दुवैतिर विशेष दूत पठाएर एउटा सन्तुलन कायम गर्ने, कता–कता एकपाखे हुन्छ कि नेपाल भन्ने चिन्ता त्यतिवेला मानिसहरुको मनमा थियो । तर, हामी त्यस्तो होईन । हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा हामी निर्देशित छौं । नेपाल यसबाटै निर्देशित छ ।
सरकार अब व्यावहारिक बनौँ यो महामारीको प्रकृति हेर्दा यसको विश्वव्यापी स्थिति हेर्दा नेपालमा पनि विस्तारै खाली विदेशबाट आएकालाई मात्रै होईन, नेपालमै भएकालाई पनि संक्रमणका केही संकेतहरु देखिए, त्यसले गर्दा जतिसुके अप्ठ्यारो भएपनि लकडाउनलाई एउटा मुख्य हतियारको रुपमा हामीले प्रयोग गर्नैपर्ने देखिन्छ । अझै केही समय । अब त्यो सरकारले सबै स्थिति बुझिराखेकै छ । केही समय अझै हामीले धैर्यता लिर्नैपर्ने छ । केही समय पीडा भोग्नैपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडौंबाट हिँडेर सप्तरी, सुनसरी जाने भनेर मान्छेहरु बाटो लागेका छन् । कुम्लो, कुटुरो बोकेर हिँडेका छन् । त्यो देख्दा बडो भावुक पनि हुने गरेको छु । त्यसकारण ती सबै जनताप्रति, मजदुरहरुप्रति, गरिब जनताप्रति मेरो विशेष सहानुभूति छ । उहाँहरुलाई सरकारको तर्फबाट राहतको घोषणा पनि भएको छ । साथसाथै, मैले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु, अलि पुँजीपतिहरुलाई यस्तो बेलामा, किनकी यो कोरोनाले त अहिले पुँजीपति पनि भनेको छैन्, मजदुरपनि भनेको छैन् । यो जातिपनि भनेको छैन् । त्यो जातिपनि भनेको छैन् । यो देशपनि भनेको छैन् । त्यो देशपनि भनेको छैन् । यो धर्मपनि भनेको छैन् । त्यो धर्मपनि भनेको छैन् । संसारका मानिसमाथि मात्रै त्यसले एकै ढंगले आक्रमण गरेको छ । कुन ठूलो पदको ? कुन सानो पदको ? भनेर पनि त्यसले भेद छुट्याएको छैन् । यस्तो बेलामा हामीले अलिकति मानवीय हृदय खोलेर त्यस्तो निजी व्यवसायीहरुलाई अगाडि आउन र मजदुर र सबै निमुखाहरुलाई सहयोग गर्न अलिक मुठ्ठी खोल्न मैले सुरुमा पनि अपिल गरेको थिएँ । म आजपनि फेरि भन्न चाहन्छु ।
प्रस्तुत विचार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचारबाट सम्पादन गरि प्रकाशन गरेका हौँ । – साभार समय पोस्ट ।
राजमार्गमा रुँदै पानीमा भिज्दै हिंडेका मजदूर भन्छन ‘चुनाब फेरी आउँछ’
उदयपुरको मस्जिदमा लुकेका ८ भारतीयमा नागरिकमा कोरोना पुष्टि